EMUI 9.0 miorina amin'ny Android Pie dia haseho amin'ny IFA 2018 | Androidsis
Eder Ferreño | | Huawei, IFA, Android Version
Android Pie dia natao ofisialy roa herinandro lasa izay. Ankehitriny dia anjaran'ny marika ny manomboka manavao ny kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa. Ary tsikelikely dia manana vaovao isika, izay avy amin'i Huawei izao. Ny mpanamboatra sinoa dia nanambara ny fahatongavan'i EMUI 9.0, ilay kinova fananganana ny fanaingoana azy, izay hiorina amin'ny Android Pie.
Nanambara ny orinasa sinoa fa ny EMUI 9.0 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny IFA 2018, izay manomboka ao anatin'ny herinandro mahery. Amin'ity hetsika ity dia haseho manerantany, ary ny fanavaozana dia tsy ho ela dia ho tonga.
Amin'izao fotoana izao ny vaovao nampidirin'i Huawei tao amin'ny EMUI 9.0 dia tsy fantatra. Azo antoka fa hisy ny fiovan'ny interface amin'ny marika, satria miorina amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa. Saingy amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy sary na antsipiriany naseho momba izany.
Huawei dia hanomboka hanavao ny telefaona aorian'ny fanambarana. Araka ny marika, amin'ny volana septambra dia hanomboka hanavao modely isan-karazany amin'ilay elanelam-potoana io tsimbadika vaovao amin'ny sosona fanaingoana io. Toa ireo maodelin'ny elanelam-P20 no ho voalohany mankafy ity fanavaozana ity.
ihany koa ny finday amin'ny fianakavian'i Mate 10 dia hankafy izany amin'ny volana septambra. Ka ireo laharana farany farany roa avy amin'ny mpanamboatra sinoa no ho voalohany mankafy ny EMUI 9.0. Tsy misy tsy ampoizina loatra amin'ity lafiny ity. Na dia tsy fantatra na samy handray azy miaraka amin'ny fotoana iray.
Azo inoana fa afaka andro vitsivitsy, dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny vaovao isika fa handao antsika ny EMUI 9.0. SAINGY ny fiandrasana hatramin'ny IFA 2018 dia tsy ela loatraKa tsy hiandry ela intsony isika vao hahalala ny momba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Huawei hanolotra EMUI 9.0 miorina amin'ny Android Pie ao amin'ny IFA 2018
Antenaina fa hivoaka tsy ho ela ny fiheverana ny haja 10 izay mitondra ny soc mitovy amin'ny p20, satria mikasika an'io dia tsy haiko raha ny haja fijery 10 no hajan'ny voninahitra sa misy ambony hafa. izay tsy haiko
LG dia manolotra headphones tsy misy tariby miaraka amin'ny bokotra ho an'ny Google Assistant